Nyocha nke Wiko View 5, batrị na ọtụtụ ndị ọzọ | Gam akporosis
Taa, anyị nwetara na Androidsis ọhụrụ ama site na ndị enyi nke Wiko. echiche Wiko 5. Ngwaọrụ jisiri ike dọta uche n'ihi ọdịdị ya dị egwu, mana na mgbakwunye na nke ahụ, ọ nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye anyị. Nlele 5 rutere iji gosi anyị ọzọ na ị na-adịghị mkpa na-emefu a uba nwere a mobile ike nke ihe niile.
Ọnwa ole na ole gara aga, anyị nwere ihu ọma iji nwalee ya Wiko Y61, a isi ama ma ike nke na-enye anyị ihe niile anyị nwere ike mkpa si a mobile. Taa anyị na-elekwasị anya ọzọ ihe zuru ezu echiche ngwaọrụ ma ruru eru n'akụkụ niile. Wiko na-enye ọzọ ekwentị dị ike na batrị, igwefoto na nhazi na ọnụahịa dị.
1 Wiko View 5, ihe niile ịchọrọ
2 Na-elele igbe 5
3 Nhazi nke Wiko View 5
4 Ihuenyo nke Wiko View 5
5 Anyị na-ele anya na Wiko View 5
6 Igwefoto nke Wiko View 5
6.1 Ihe nlere anya foto na Wiko View 5
7 A nnọọ "top" batrị na obodo kwụụrụ
8 Nche na ndị ọzọ
9 Wiko Lelee tebụl nkọwa 5
10 Uru na ọghọm
Wiko View 5, ihe niile ịchọrọ
O yiri ka ọtụtụ ndị kwubiri na ha nwere smartphone dị ike nke na-agbaze ihe niile anyị ga-eme. O doro anya na ekwentị nke ọnụahịa ya ruru euro 500 ga-adị ike ma nwee teknụzụ niile nke oge a. Anyị makwaara na anyị nwere ike ọbụna mefuo okpukpu abụọ iji nwee ọkọlọtọ nke ụdị ndị kachasị iche.
Site na Wiko ha na-ekwusi ike na nkà ihe ọmụma dị mfe karị ka ọha na eze. Na-eweta ngwaọrụ na ahịa ahụ adala mba ọ bụla n’ime ihe ndị ahụ nke ahụ nwere ike ịme otu n'ime smartphones kacha "elu" mana ọnụ ahịa ndị ọzọ na-ewu ewu. Wiko View 5 bụ ihe atụ doro anya na anyị nwere ike ịnweta ihe niile anyị chọrọ na ego dị oke ọnụ.
Na mgbakwunye inwe ụdị ndị bụ isi maka ndị ọrụ na-achọghị obere, Wiko nwekwara ngwaọrụ ndị ọzọ siri ike karị. Anya Wiko 5 gbagoo elu na ikike nhazi, batrị ma na-enweta ọtụtụ nọmba na ngalaba nke foto ya na ihe ijuanya modul nwere aka 4 anya nke anyị ga-abanye n'ime nkọwa zuru ezu n'okpuru. Ya ị nwere ike nweta Wiko View 5 en Amazon na mbupu n'efu.
Na-elele igbe 5
Ka ọ dị na mbụ, ọ bụ oge na-ele n'ime igbe nke Wiko View 5 iji gwa gị ihe niile anyị nwere ike ịchọta n'ime. Anyị nwere ngwaọrụ na ihu, na site na ijide ya n'aka anyị, anyị nwere ike ịghọta nnukwu nha ihuenyo ya nwere.
Anyị na-achọpụtakwa ihe niile anyị nwere ike ịtụ anya ya. Nchaji isi na data, na nke a ihe na-eme anyị obi ụtọ, na usoro USB Cdị C. Anyị mechara kwuo Micro Micro na nzọ na ngwa njikọ, ike na nchekwa. Anyị nwekwara Chaja ikike, n'oge a Wiko abanyeghi na omume nke ndị a na-apụ n'anya na igbe.
Wiko na-aga n'ihu ịkụ nzọ na ịgbakwunye n'etiti ngwa ọrụ ụlọ ọrụ ekweisi ụfọdụ Na eriri, nkọwa nke a na-enwekarị ekele. Maka ndị ọzọ, akwụkwọ na nkwa nke ngwaahịa, ụfọdụ mgbasa ozi na obere Ndenye Malite Guide. Na nke a anyị anaghị ahụ mkpuchi silicone.
Nhazi nke Wiko View 5
Na ngalaba imewe, Wiko emeela ihe dị mkpa n'ihu na Nlele 5. Ọdịdị ya dị nso na nke ngwaọrụ ndị kachasị dị ugbu a. Na imepụta ama, ọ bụ ezie na ọ bụghị akụkụ kachasị mkpebi, ọ na-adịwanye mkpa mgbe ị na-ekpebi otu ma ọ bụ ụdị ọzọ.
Akụkụ kachasị dị egwu nke View 5 bụ ịrụ ụka adịghị ya azụ ya. Ọ nwere imecha na acha anụnụ anụnụ na gradients mara mma nke ukwuu. Ihe na - eme ya ezigbo ọnụ ugbu a na nke ahụ bụ na-adọrọ adọrọ maka ndị na-eto eto. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ụzọ na-aga nke ọma iji melite atụmatụ nke smartphone na-efunahụ ọdịdị "elu" ya.
Ya azụ akụkụ na-anọchi anya a foto igwefoto modul n'ezie ihe ijuanya. Ruo mgbe Anya m 4 na ọkụ ọkụ Ha na-anọ na rektangulu enịm vetikal na-apụta ihe mara mma. Anyị na-ahụkwa na akara mkpisiaka nke dị na ọnọdụ kachasị mma maka onye ọrụ.
Lee ị nwere ike ịzụta Wiko View 5 na ọnụahịa kacha mma na Amazon
na mpụta nri anyị na-achọta ahụ bọtịnụ anụ ahụ. Anyị nwere bọtịnụ elongated maka njikwa olu nke dị n'akụkụ kachasị elu, ọ bụrụ na anyị nwere ekwentị n'aka. Na ala anyị nwere bọtịnụ ahụ gbanyụọ na mkpọchi / kpọghee. Ma anyị nwekwara a zọ mkpirisi nhazi nke bara ezigbo uru.
Ọ bụrụ na i lee anya na elu nke Wiko View 5 naanị anyị na-ahụ 3,5 ọdụ ụgbọ mmiri jikọọ anyị ot ekweisi. Na-enweghị mkpa njikọta bluetooth anyị nwere ike ijikọ ekweisi Wiko, ma ọ bụ ndị ọ bụla ọzọ anyị nwere n'ụlọ. N'akụkụ aka ekpe anyị nwere Oghere kaadị SIM. Anyị nwere ike iwebata kaadị SIM abụọ n’otu oge. Ma ọ bụ kaadị SIM na a Micro SD kaadị ebe nchekwa.
Ihuenyo nke Wiko View 5
Ihuenyo bụ otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke ngwaọrụ ma ọ bụ ihe anyị na-ege ntị mgbe niile tupu ịzụrụ ekwentị mkpanaaka. Size eme ihe na nke a, mana mkpebi na ntinye nke ihuenyo na ihu ihu dịkwa mkpa. Wiko View 5 nwere ihuenyo diagonal nke ihe di egwu 6,55.
Ahụmahụ ihuenyo buru ibu dị mma karị mgbe nha nke ngwaọrụ ahụ adịghị emetụta oke oke nke ngwaọrụ ahụ. N'okwu a, na-ekele ụfọdụ ntakiri osisi, Ngwakọta 6,55 nke anụ ọhịa dị mma. Anyị nwere nnukwu ihuenyo na ngwaọrụ "nkịtị".
Anyị nwere ihuenyo 20: 9 akụkụ ruru IPS LCD nke na - eme Wiko View 5 ka ọ bụrụ ngwaọrụ zuru oke iji nwee ọ contentụ na ọdịnaya multimedia. Mkpebi ahụ abụghị otu n'ime ike ya ma o nwere 720 x 1600 px na HD +. Nwere a njupụta weere nkezi na ọkwa nke 268 ppi na a nwuo nnabata nke 450 nits. Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ ama ekwentị niile, nweta Wiko View 5 ugbu a na Amazon na free mbupu.
Ihe omuma a bu ihe anyi choro kachasi ahia. Na obere "Oghere" na ihuenyo na akuku aka ekpe aka ekpe, igwefoto dị n’ihu zuru oke. Na mgbakwunye, Wiko na menu nhọrọ ahaziri enye anyị nhọrọ iji zoo ya site na ngwanrọ na-agbakwunye ogwe ọchịchịrị n'elu. Enweghi oke nghọta na nghọta anyị n'ihi na nke a na-eme ka anyị hapụ ntakịrị akụkụ nke ihuenyo mmesapụ aka ya.
Anyị na-ele anya na Wiko View 5
Oge eruola ịgwa gị okwu banyere ihe ele 5 nwere ike ịnye anyị n'ọkwa arụmọrụ. Dị ka ụdị Wiko ndị ọzọ, maka njikwa na emeputa MediaTek na-gua na. Na nke a anyị hụrụ MediaTek Helio P22. Mgbawa nke na-eme ka Cubot, Alcatel ma ọ bụ Ulephone tụkwasịrị obi maka ngwaọrụ dị n'etiti. Ọ bụghị nhazi nke pụtara ìhè n'etiti ndị kachasị ike, mana nweta Echiche 5 ka ọ na-aga n'enweghị nsogbu na ọrụ ọ bụla.
Maka CPU anyị hụrụ a Octa Core na 4 cores 1.8 GHz na 4 ọzọ na 1.5 GHz na ihe owuwu 64-bit. N'okwu nke eserese anyị nwere IMG PowerVR GE8320 GPU. Ihe Wiko View 5 nwere Nchekwa 3 GB Ram ya na a 64GB nchekwa, nke dị ka anyị kwurula na anyị nwere ike ịgbasa na kaadị Micro SD. Ọ dị mma ịmara na ị nwere 94.000 Antutu akara, dị mma karịa 60% nke mobiles ndị anwaleworo.
Igwefoto nke Wiko View 5
Igwefoto ka dị otu n'ime akụkụ kachasị mkpa mgbe ị na-enweta ekwentị. Ma ọ bụ, na-enweghị obi abụọ, ebe ọNdị na-emepụta ihe ewepụtala ọmụmụ na mmepe ịsọ mpi. Igwefoto etolitela kemgbe oge mbụ ha abanye n'ime igwe.
Na Wiko, ha achọghị ịdị obere ma anyị ahụla etu ngwaọrụ ha si malitekwa na ngalaba igwefoto. Nlele 5 abụghị otu ma wee bịa nke ọma maka ịse foto. Anyị na-achọta modul igwefoto na-adọta uche ma were ọtụtụ ọrụ nke ngwaọrụ ahụ.
Wiko View 5 rutere na a foto igwefoto nwere 4 anya m dị njikere ịnye ahụmịhe zuru oke na foto.
Standard ihe mmetụta CMOS na mkpebi nke 48 Mpx, pikselụ nha 0,8
Mmetụta maka mode eserese na mkpebi nke 2 Mpx
Lensị obosara na mkpebi nke 8 Mpx
Lensị nnukwu na mkpebi nke 5 Mpx
Anyị na-ahụkwa a n'ihu igwefoto maka selfies nke nwere 8 Mpx. Igwefoto na nke anyị na-ekwusi ike na ntinye nke ọma na ihu ngwaọrụ ahụ. Họrọ ụdị nke mwekota na ngwaọrụ nke ọmarịcha ihe na obere "intrusive" na nkwekọrịta nke ihuenyo ahụ. Oghere na ọbụna iji gosi ọkwa batrị na gburugburu ya. Ọ bụrụ na igwefoto dị gị mkpa, ebe a ị nwere ike nweta Wiko View 5.
La ngwa igwefoto Nlele 5 adịghị apụ apụ kpọmkwem n'ihi na ọ zuru ezu, ma ọ bụrụ na ọ bụ cnwee ike ịnye anyị nhọrọ niile anyị chọrọ na oge obula. N’ụzọ dị mfe anyị nwere ike ịhọrọ n’etiti ụdị foto dị iche iche, nke a na-akpọ blur pụta ìhè, nwee ike ịmepụta foto mara mma na kpochapụwo kpochapụwo ndabere. Ma ọ bụ họrọ ndekọ vidiyo na ngwa ngwa na 30 okpokolo agba kwa nke abụọ.
Ihe nlere anya foto na Wiko View 5
Anyị gara ebe ahụ iji lee igwefoto foto Lee Lee 5. Iji nwee ike igosi gị kedu ka igwefoto a si eme Onweghị ihe dị mma karịa foto nke foto anyị nwere ike ịse. Mgbe ahụ anyị ga-ahapụ gị ụfọdụ nwudo were igwefoto nke Wiko View 5.
Na a foto nke dịpụrụ adịpụ, na ọnọdụ nke eke ìhè na urukpuru ụbọchị na mgbe anyanwụ dara, anyị na-enweta nnukwu nti utịp. Ọ bụ ezie na ihe ndị ahụ adịghị nso igwefoto ahụ, Nkọwa na ọdịdị na-eme ka mkparịta ụka ha nke ọma. Na ụda ga-ekwe omume anyị chọtara ezigbo nguzozi ocha ọ dịghị ngwakọta dị egwu.
Na foto a, yana ihe mmeghari ihu, anyị zuru oke na-ahụ omimi na ebe dị anya na-enweghị efunahụ nkọwa. Ikekwe n'ime ihe kachasị dị na mbiet ahụ anyị na-ahụ mkpọtụ, ihe nghọta ga-enyere ebe dị anya.
Ebe a ese foto nso, na-achọ mkpebi nke igwefoto a na nkọwa. Anyị ewerela obere foto wee nweta nkọwa zuru ezu nke skates. Anyị nwere ike ịghọta n'ụzọ zuru oke textures na agba dị iche iche nke agba. Enweghi nkọwa zuru oke, anyị nwere ike ịtụle nsonaazụ ya dị mma.
Na foto a anyị na-ahụ otu anyị ga - esi tụkwasị obi foto ndị na-enye ọkụ na nghọta. Anyị na-ahụ a akwa agba gamut na ihe fọrọ nke nta ka yiri agba ụda iche.
Site na foto ndị emere, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ọnọdụ niile, anyị nwere ike ịtụ anya nsonaazụ na-eju afọ. Ekwesiri ighota na foto ndi emere na ihe di nma nke oma na-adi nke oma na igwefoto obula. Na foto na ihe njo ka njo na agbanwe obere,, ọ bụ ezie na enyemaka nke ọkụ LED na-ejikwa ike iji belata adịghị ike. Na nkenke, ngalaba foto nke ele 5 dị n'etiti ngwaọrụ kachasị mma, yana maka onye ọrụ nkezi, inwe igwefoto a ga-abụ ozi ọma.
A nnọọ "top" batrị na obodo kwụụrụ
Ebe anyị na-ahụ ọzọ nke ike nke Wiko View 5. Batrị ahụ, dịka anyị kwurula ugbu a n'ọtụtụ oge, ka bụ nnukwu echefuru nnukwu mmalite na mmepe nke smartphones. Nlele 5 batara na ezigbo ọnụ ọgụgụ na usoro nke ikike ibu, kamakwa na usoro nke nnwere onwe.
Dị ka anyị si mara, inwe ụgwọ batrị buru ibu anaghị adabara mgbe niile. Nnukwu ihuenyo, GPS, na ngwa ọdịnala bụ ezigbo ndị iro nke batrị ahụ. Ya mere, mgbe anyị chọtara ngwaọrụ jisiri ike nweta ezigbo nguzozi dị n'etiti nnwere onwe na ike oriri, anyị ga-amata ya.
Anya Wiko 5 na-ekwe nkwa anyị ichefu chaja kpamkpam n'oge ihe karịrị ụbọchị abụọ zuru ezu, ọbụna na-eji ngwaọrụ "eme ihe ike". Na ibu nke 5.000 mAh, ndu nke ekwentị nwere ike iru mgbe ụfọdụ ruo ụbọchị atọ nke iji, ee, jiri obere ihe na-achọ ya. Batrị gị nke lithium polymers na-ekwe nkwa ogologo ndụ ọrụ. Mana anyị kwesịrị ịmara na Wiko View 5 adịghị nwere ngwa ngwa odori technology, ma ọ bụ iji ikuku akwụ ụgwọ.
Nche na ndị ọzọ
Maka nchekwa nke data anyị na Wiko View 5 anyị nwere a akara mkpisiaka agụ nke dị n'azụ etiti nke ngwaọrụ. Anyị nwere ike ikwu nke ahụ ọgụgụ ahụ nsonaazụ mkpisiaka ngwa ngwa na mgbe niile ziri ezi. Ọzọkwa usoro ịdenye akara mkpịsị aka anyị dị mfe na ngwa ngwa.
Na mgbakwunye na akara mkpisiaka, Nlele 5 nwere enwere ike imejuputa nchedo site na iru ihu. Iji software, anyị nwere usoro nke aka anyị nke na-edeba ihu anyị. Na ya anyị nwere ike ịmeghe ngwaọrụ ozugbo anyị pịa bọtịnụ ụlọ.
Eziokwu bụ na ọ na-enwe ekele nwere ihe karịrị otu ụzọ akpọchi ngwaọrụ. Ma enwere ihe na - eme na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ekwentị niile nwere mkpịsị aka mkpịsị aka. Unlock site na nchọpụta ihu ihe anaghị arụ ọrụ. Site n'inwe ngwaọrụ n'aka gị, dị nnọọ site na ọ fọrọ nke nta involuntarily ịtụkwasị anyị index na azụ, na ngwaọrụ na-ama agbachi.
Anyị enweghị njikọ 5G, ihe anyị ka nwere ike ịtụle dị ka ihe dị mma, ọkachasị na ngwaọrụ ndị na-esighi n'etiti ndị kachasị mkpa na ahịa. Wiko View 5, agbanyeghị na ọ bụ ngwaọrụ ebupụtara ihe karịrị ọnwa ise gara aga, enweghị njikọ 5G. Maka Bluetooth, egosighi mbipute 5, ma nwee nsụgharị nke 4.2. Site na nkwekọrịta, ọ bụ dakọtara na ụkpụrụ Wi-Fi niile.
Anyị nwere ike ịsị, itinye obere ole na ole, na ndị a bụ, yana enweghị enweghị ụgwọ ngwa ngwa, akụkụ kachasị njọ nke Echiche 5. Mana ọ nwere ụfọdụ mgbakwunye ndị ndị nrụpụta ndị ọzọ kpụrụ na anyị na-amasị ọtụtụ ihe dị ka ya 3,5mm jaak nkwụnye. Ọ na-enwetakwa gị ọtụtụ isi Igwe Redio, na-arịwanye elu na disuse, mana ndị nwere mmasị na ya nwere ekele dị ukwuu. Ọ bụ ezie na anyị ga-achọpụtakwa na ịnwe ekweisi nwere eriri ka ha wee rụọ ọrụ dị ka poolu anaghị adị mma.
Wiko Lelee tebụl nkọwa 5
Nlereanya Lelee 5
Ihuenyo 6.55 HD + IPS LCD
Nhazi ihuenyo 20: 9
Mkpu ihu 720 X 1600 px - HD +
Njupụta ihuenyo 268 ppp
Ebe nchekwa Micro SD
Nhazi MediaTek Helio P22
CPU Octa-isi 1.8 GHz
GPU Ihe ngosi IMG PowerVr GE8320
Rear igwefoto quad mmetụta 48 + 2 +8 + 5 Mpx
Igwefoto Selfie 8 Mpx
Ngwa mbugharị OBU
Mbugharị dijitalụ SI
Batrị 5000 mAh
Ngwa ngwa ngwa OBU
Ikuku na-akwụ ụgwọ OBU
Ibu ibu 201 g
Akụkụ 76.8 x 166.0 x 9.3
Ahịa 157.00 €
Linkzụta njikọ Anya Wiko 5
Anyị ekwuola ihe karịrị otu oge iji kwuo maka uru na ọghọm nke ngwaọrụ ọ dị mkpa iburu n'uche ọnụahịa ya. Ya mere, anyị nwere ike ịmatakwu ebe ịchọta ekwentị a, ihe anyị nwere ike ịchọ yana otu anyị ga-esi edozi.
Anyị nwere mmasị na gị ihuenyo, n'aka nke tamaño na mkpebi, kamakwa n'ihi ihe ngwọta na oghere dị na ihuenyo iji zere ọkwa ahụ.
Su igwefoto quad, Na mgbakwunye na ịmasị nke anụ ahụ na ngalaba ebe ha dị, nsonaazụ anyị nwetara na foto ndị ahụ adịla mma.
Otu n'ime ike nke Wiko View 5 bụ Batrị na anyị enwewo ike ịhụ otú ọ ga-esi kwe omume ịhụ ama nke ruru ruo ụbọchị atọ nke iji.
Na ihuenyo 6,55 nke anụ ọhịa na batrị 5.000 mAh, nha na ọkpụrụkpụ nke ngwaọrụ na-ọma ọma enweta.
Anya Wiko 5 anaghị akwụ ụgwọ ngwa ngwa ma ọ dighi Nchaji ikuku, ihe na-eme ka inwe 100% ụgwọ anyị ga-eche obere oge karịa ka a tụrụ anya ya.
A s2021 martphone na-enweghị 5G Ọ bụ ihe nkịtị dabere na ihe anyị chọrọ itinye ego, mana anyị na-achọkarị inweta ihe kachasị ọhụrụ.
Adịghị agba ụgwọ
Anya Wiko 5
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Nyocha nke Wiko View 5, batrị na ọtụtụ ndị ọzọ